Vaovao sy fanavaozana eo amin'ny sehatry ny informatika ara-jeografika
IMARA.EARTH ny fanombohana izay mamaritra ny fiantraikan'ny tontolo iainana
Ho an'ny nomerika faha-6 amin'ny Gazety Twingeo dia nanana fotoana nitafatafa tamin'i Elise Van Tilborg, mpiara-manorina ny IMARA.Earth izahay. Ity fanombohana Holandey ity dia nahazo ny Planet Challenge tao Copernicus Masters 2020 ary nanolo-tena tamin'ny tontolo maharitra kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana tsara ny tontolo iainana. Ny teny filamatr'izy ireo dia "Ataovy sary an-tsaina ny fiantraikan'ny tontolo iainana", ary manao ...
cadastre drôna Geomatics GIS
Cartografia, cadastre, jeospatial - GIS
Tantaran'ny fandraharahana. Geopois.com
Amin'ity andiany faha-6 an'ny Twingeo Magazine ity dia manokatra sehatra natokana ho an'ny fandraharahana izahay, tamin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'i Javier Gabás Jiménez, izay nifandraisan'i Geofumadas tamin'ny fotoana hafa ho an'ny serivisy sy ny fotoana natolotra ny vondrom-piarahamonina GEO. Noho ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina GEO dia afaka namolavola ny drafitray ...
Fianarana GIS GIS shp
Cartografia, Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS
Bhupinder Singh, mpitantana ny vokatra teo aloha ao amin'ny Bentley Systems, miditra amin'ny filankevi-pitantanan'ny Magnasoft
Rehefa miomana ny ho tafita velona amin'ny tontolon'ny COVID izao tontolo izao, Magnasoft, mpitarika ny fampahalalana sy serivisy ara-jeografika nomerika miaraka amin'ny fanatrehany any India, UK ary Etazonia, dia mitondra vaovao mampahery ho antsika. Nanamafy ny ekipany mpitarika izy tamin'ny alàlan'ny Birao mpitantana iray vao niforona, nampiditra an'i Bhupinder Singh,…
Gersón Beltrán ho an'ny Twingeo fanontana faha-5
Inona no ataon'ny mpahay jeografia? Efa ela izahay no te-hifandray amin'ilay mpandray anjara tamin'ity tafatafa ity. Gersón Beltrán dia niresaka tamin'i Laura García, ampahany amin'ny ekipan'ny Gazety Geofumadas sy Twingeo mba hanomezana ny fomba fijeriny ny ankehitriny sy ny hoavin'ny jeografia. Manomboka amin'ny fanontaniantsika hoe inona no tena ataon'ny Geographer iray ary raha - toa ny maro ...
jeospatial - GIS, Engineering
Geomoments - Fihetseham-po sy Toerana ao anaty fampiharana iray
Inona ny Geomoments? Ny revolisiona indostrialy fahefatra dia nameno antsika tamin'ny fandrosoana ara-teknolojika lehibe sy ny fampidirana fitaovana sy vahaolana hahatratrarana toerana mavitrika kokoa sy mahavariana ho an'ny mponina. Fantatray fa ny fitaovana finday rehetra (finday, takelaka, na smartwatch) dia afaka mitahiry fampahalalana marobe, toy ny antsipirian'ny banky, ...
jeospatial - GIS, Google Earth / Maps, fanavaozana, Internet sy Blogs, maro
Ny National States Geographic Information Council (NSGIC) dia manambara ny fanendrena mpikambana vaovao dimy ho ao amin'ny filankevi-pitantanana azy, ary koa ny lisitr'ireo manamboninahitra sy mpikambana ao amin'ny Birao mandritra ny taona 2020-2021. Frank Winters (NY) dia filoham-pirenena voafidy handray ny toeran'ny filohan'ny NSGIC, maka ny fitondrana avy amin'i Karen ...
Nanaovan'i Esri sonia ny fifanarahana fahatakarana niaraka tamin'ny UN-Habitat
Esri, izay mpitondra eran-tany amin'ny faharanitan-toerana, dia nanambara androany fa nanasonia sonia fanekem-pahatakarana (MOU) niaraka tamin'ny UN-Habitat izy. Ao anatin'ny fifanarahana dia hampiasa rindrambaiko Esri ny UN-Habitat hananganana fotodrafitrasa ara-teknolojia eoropeanina miorina amin'ny rahona mba hananganana tanàna sy vondrom-piarahamonina manerana an'izao tontolo izao azo antoka, azo antoka, maharitra ary maharitra ...
ArcGIS-ESRI, jeospatial - GIS
Master amin'ny Geometry ara-dalàna.
Inona no antenaina avy amin'ny Master amin'ny Geometry Ara-dalàna. Nandritra ny tantara dia tapaka fa ny cadastre amin'ny trano no fitaovana mahomby indrindra amin'ny fitantanana ny tany, noho io, angona an'arivony sy ara-batana an'arivony mifandraika amin'ny tany iray no azo. Etsy ankilany, hitantsika fa tato ho ato ...
cadastre Fianarana GIS GIS
Cartografia, cadastre, Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS
Bentley Systems dia mandefa fanolorana ho an'ny daholobe (IPO-IPO)
Bentley Systems dia nanambara ny fanombohana ny fanolorana ho an'ny daholobe voalohany amin'ny fizarana 10,750,000 amin'ny fizarana iraisana Class B. Ny kilasy iraisan'ny Class B. izay atolotra dia hamidin'ny tompon-trano Bentley efa misy. Ireo tompon'andraikitra mivarotra dia manantena ny hanome ireo mpisoratra anarana amin'ny fanolorana safidy 30 andro hividianana hatramin'ny ...
jeospatial - GIS, Engineering, Microstation-Bentley
TwinGEO Fanontana faha-5 - Ny fomba fijery ara-jeografia
NY HEVITRA GEOSPATIAL Amin'ity volana ity dia asehontsika ny Gazety Twingeo ao amin'ny fanontana faha-5, manohy ny lohahevitra afovoan'ny "The Geospatial Perspective" teo aloha, ary izany dia betsaka ny lamba hokapaina momba ny hoavin'ny teknolojia geospatial sy ny fifandraisana misy eo amin'ny hafa indostria manan-danja. Manohy mametraka fanontaniana izay mitarika amin'ny ...
jeospatial - GIS, qgis
Fijery geospatial sy SuperMap
Geofumadas dia nifandray tamin'i Wang Haitao, filoha lefitry ny SuperMap International, mba hijery mivantana ny vahaolana vaovao rehetra eo amin'ny sehatry ny geospatial, natolotry ny SuperMap Software Co., Ltd. avy amin'ny mpamatsy China GIS SuperMap Software Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao an'ny ...
jeospatial - GIS, fanavaozana, SuperGIS
Nanatevin-daharana ny fifanarahana Geospatial Public Sector i Skotlandia
Nanaiky ny governemanta Scottish sy ny Kaomisiona Geospatial fa hatramin'ny 19 Mey 2020 dia hiditra ao amin'ny fifanarahana Geospatial Sektorim-bahoaka vao haingana i Ekosy. Ity fifanarahana nasionaly ity izao dia hisolo ny fifanarahana fifanarahana momba an'i Scotland Mapping (OSMA) sy Greenspace Scotland ankehitriny. Mpampiasa governemanta Scottish, ...
Cartografia, jeospatial - GIS, fanavaozana
Geopois.com - Fa inona?
Vao tsy ela akory izay no niresaka tamin'i Javier Gabás Jiménez, injenieran'ny Geomatika sy Topografia, Magister ao amin'ny Geodesy and Cartography - University Polytechnic of Madrid, ary iray amin'ireo solontenan'ny Geopois.com. Tianay ny handray an-tanana ny fampahalalana rehetra momba ny Geopois, izay nanomboka fantatra nanomboka ny taona 2018. Nanomboka tamin'ny fanontaniana tsotra izahay, Inona ny Geopois.com?
SARITANY geospatial Geomatics Webmapping
jeospatial - GIS, fanavaozana
Vexel dia nandefa ny UltraCam Osprey 4.1
UltraCam Osprey 4.1 Vexcel Imaging dia manambara ny fandefasana ny taranaka ho avy UltraCam Osprey 4.1, fakan-tsarimihetsika lehibe manerantany ho an'ny fanangonana sary sy sary (nad, PAN, RGB ary NIR) sy sary mitongilana (RGB). Fanavaozana matetika ny fisehoana nomerika marefo, tsy misy tabataba ary tena marina ...
photogrammetry sary remote sensors Vexcel
cadastre, jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana, Engineering, fanavaozana, maro
ETO ary Loqate Expand Partnership mba hanampiana ireo orinasan-tserasera manatsara ny fandefasana
ETO Technologies, sehatra angon-drakitra sy haitao misy ny toerana ary Loqate, mpamorona ny vahaolana amin'ny fanamarinana ny adiresy manerantany sy ny vahaolana geocoding, dia nanambara fiaraha-miasa nitarina mba hitondran'ny orinasa ny teknolojia farany voasambotra amin'ny adiresy, ny fanamarinana ary ny geocoding. Ny orinasa amin'ny indostria rehetra dia mitaky angon-drakitra ...
digitization geocoding Geomatics GIS ETO
Cartografia, jeospatial - GIS
Ny FES dia nandefa ny Observatory India ao amin'ny GeoSmart India
(LR) lietnà jeneraly Girish Kumar, mpandrefy jeneraly ao India, Usha Thorat, filohan'ny filankevi-pitantanana, FES ary governora lefitra teo aloha an'ny Reserve Bank of India, Dorine Burmanje, mpiara-mpitantana, Global Geospatial Information Management an'ny Ny Firenena Mikambana (UN-GGIM) sy Jagdeesh Rao, CEO, FES, nandritra ny fanombohana ny Observatory ...
Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - andro 1
Ny Konferansa gvSIG Iraisam-pirenena faha-15 dia natomboka tamin'ny 6 Novambra, tao amin'ny Sekoly Teknika Higher of Geodetic, Cartographic and Topographic Engineering - ETSIGCT. Ny manokatra ny hetsika dia notanterahan'ny manampahefana ao amin'ny University Polytechnic of Valencia, ny Generalitat Valenciana ary ny Tale jeneralin'ny gvSIG Alvaro Association ...
jeospatial - GIS, GvSIG, fanavaozana
Gazety Geo-Engineering & TwinGeo - Fanontana faharoa
Niaina fotoana mahaliana tamin'ny fanovana nomerika izahay. Isaky ny fifehezana, ny fanovana dia mihoatra ny fandaozana tsotra ny taratasy ho amin'ny fanatsorana ny fomba fitadiavana ny fahombiazana sy ny vokatra tsara kokoa. Ny sehatry ny fananganana dia ohatra mahaliana iray, entanin'ny famporisihana ho avy tsy ho ela toy ny Internet ...
jeospatial - GIS, Engineering, My egeomates
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 19 Next pejy